अष्ट्रेलियाको चुनावमा प्रधानमन्त्री मोरिसनको अनौठो जित - Sabal Post
अष्ट्रेलियाको चुनावमा प्रधानमन्त्री मोरिसनको अनौठो जित
अष्ट्रेलियाको चुनावमा प्रधानमन्त्री मोरिसनको दल लिवरल पार्टी अफ अष्ट्रेलियाले जितेको छ । शनिबार भएको मतगणनाले विभिन्न जनमतलाई असत्य सावित गर्दै लिवरल पार्टीले जितेको छ । स्कट मोरिसन यसअघि पहिलो पटक अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । मोरिसनको पार्टीको ६ वर्षे शासनमा मतदाताले उनकै पक्षमा मत देलान् भन्ने सम्भावना कम थियो । निर्वाचनको नतिजा दक्षिणपन्थी मोरिसनको पक्षमा नहुने सर्वेक्षणहरूले देखाएका थिए।
कडा चुनौतिका बावजुद मोरिसनले अल्पमतको सरकार नेतृत्व गर्ने सम्भावना प्रबल थियो । बहुमत ल्याउने अपेक्षा गरिएको थिएन । तर हिजो सम्पन्न चुनावमा उनको दलले जितेको छ । यसलाई अचम्मलाग्दो जितको रुपमा पनि हेरिएको छ।
चुनावी परिणाम पछि मोरिसनले भने, ‘म सधैं चमत्कारमा विश्वास गर्छु,’ प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले जितको खुसियालीमा भाषण गरे । ‘आजको रात सबै अष्ट्रेलियाली नागरिकप्रति समर्पित छु।’
तर उनको विजयलाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विजय र ब्रेक्जिटसँग तुलना गरिएको छ यो निर्वाचनले अमेरिकाको महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्र अष्ट्रेलियालाई एउटा गहन प्रश्न उठाएको छ- के अष्ट्रेलिया दक्षिणपन्थमा वफादार हुनेछ ? वाचा गरेजस्तो आर्थिक स्थायीत्व र रोगजार दिन सक्नेछ? वा जलवायु परिवर्तन र असमान आम्दानी समाधान गर्ने वाचा पूरा गर्नेछ? ‘अष्ट्रेलियाली निकै कन्जर्भेटिभ छन् । हामी यथास्थितीवादमा अल्झिरहन्छौं,’ जिल सेपर्डले भने । उनी अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीमा राजनीतिशास्त्र अध्यापन गर्दछन् । ‘हामीलाई केही विषयवस्तुमा प्रगति पनि चाहिएको छ तर हामीलाई आकस्मिक र ठूलो परिवर्तन मनपर्दैन,’ डेमियन केभले भने। हिजो भएको मतगणनामा लिवरल पार्टीले ७४, लेवर पार्टीले ६६ र अन्य दलहरुले ६ सिट जितेका छन्।
विवक्षी दलका नेता शर्टनको राजिनामा – बिल शर्टन विपक्षी नेता हुन् । निर्वाचनमा लेबर पार्टीको पराजय भएको घोषणा गर्दै उनी मेलबर्नको समर्थकमाझ उपस्थित भए । उनले पार्टीको नेतृत्वबाट राजिनामा दिने योजना बनाएको पनि बताए। ‘तपाईं सबै दुखी हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ,’ उनले भने,‘ म पनि दुखी छु।’
साथमा उनकी पत्नि क्लो पनि उपस्थित थिइन् । दुवै दुखी देखिन्थे । मतपरिणामको अन्तिम नतिजा नआए पनि प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनलाई बधाई दिएको उनले बताए। ‘यो एकदमै कठिन अभियान थियो । बेला–बेला निकै चर्काे पनि भयो । तर अब प्रतिस्पर्धा सकिएको छ । हामी सबैले निर्वाचनको परिणामलाई सम्मान गर्नुपर्छ । अष्ट्रेलियाको जनताको चाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको एकता भाड्न दिनुहुन्न,’ उनले भने।
तर शर्टनले निर्वाचन अवधिभर गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिए । उनी अझै पनि नीतिबारे छलफल गर्न चाहन्छन् । प्रगतिशिल विचारधारालाई अवलम्बन गर्न चाहन्छन्। उनले देशवासीलाई जलवायु परिवर्तन रोकथाम गर्न आव्हान गरेका छन् । महिला र समग्र अष्ट्रेलियाली नागरिकको समान अधिकारका लागि आवाज उठाउन पनि उनले आव्हान गरेका छन् । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
कञ्चनमा १२७ औं माओ जयन्ती – नेता…
बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान बाध्यकारी…
वी पीको शैक्षिक अभियानले आज देशभर शैक्षिक…
कोरोनावाट विश्वभर ६४ हजारको मृत्यु, १२ लाख…
विस्तार भयो मन्त्रिपरिषद, थपिए ३ मन्त्रि
प्रदेश ५ सरकारले कुनै कर लगाएको छैन…